Article - www.mixingwithleomicro.com
ＭＡＮＬＥＹ ＶＯＸＢＯＸ ကဘာထူးခြားလဲ
UAD ဝယ်တုန်းက MANLEY VOXBOX ကို Free ရခဲ့တယ် Voxbox လို့နာမည် တွင်လို့ Vox ကြီးကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး Bass အတွက်လဲ သေလောက်အောင်မိုက်တယ် ဟိုနေ့ က ကို
ကိုတောင် UAD ဝယ်ရင် ဒါလေးမဖြစ်မနေ ဝယ်ဖို့ ပြောဖြစ်သေးတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့
သူက Pre မတိုင်ခင် Comp အရင်လာတဲ့ကောင်ဆိုတာလဲ သိပြီးကြပြီ ပဲ အင်း.. Comp အမျိုးအစားကလဲ 2A တို့လို့ Opto အမျိုးအစား အဲ TubeTech နဲ့ ပိုနီးစပ်တယ် ATT / REL တွေ ‌Adjust တွေ လုပ်လို့ရတာကိုး
သူ့ Signal Flow က
IN >> COMP>> TUBE PRE >> PASSIVE EQ >> De-esser >> OUT ဒါမျိုးသွားတာကို
EQ ကလဲ Pultec Style EQ ဒါတွေက ထွေထွေ ထူးထူး မဟုတ်ပေမယ့် သူ့ လျှို့ဝှက်ချက်က
Gain နဲ့ Input နှစ်ခု ကို ထိန်းပြီး အသုံးပြု ရတာပဲ Gain က သာမန် Pre တွေနဲ့ Other Gears တွေ နဲ့ မတူပဲ ကွဲထွက်တဲ့ အချက်က တော့ negative feedback ကို TUBE ထဲ Drive လုပ်ပေးတာပဲ
Up လုပ်ရင် odd-harmonic distortion တွေ ပို အားကောင်းလုပ်ပေးပြီး ထွက်လာတဲ့ အသံက ကြည်လင်တယ် ပြတ်သားတယ် Bright ဖြစ်တယ် Forward ဖြစ်စေတယ်
Down လုပ်ရင် even harmonic distortion တွေ ပို အားကောင်းလုပ်ပေးပြီး ထွက်လာတဲ့ အသံက Warm & Rich ဖြစ်စေတယ်
Preamp တွေထဲ အကြိုက်ဆုံးဖြစ် အဲ့လို distortion တွေကို စိတ်ကြိုက် ရွေးပြီးထုတ်ယူလို့ရတဲ့ အကြောင်းလဲ ပါသလို နောက်တေ့ာ Vox သီးသန့် ပဲရနေတာမျိုး ကောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ Bass , Synth
အတွက်လဲ မိုက်နေပြန်ပါသေး ၊
နောက်ဆုုံးတစ်ချက်ကတော့ preamp တွေရဲ့ NETWORK FEEDBACK ထွက်လာတဲ့ Phase ကို Invert
ပြန်လုပ်လို့ ရတာလဲ တခြား TUBE_PRE တွေထက် ထူးခြားစေတဲ့ တစ်ချက်ပါပဲ
ဒါက ဘာကြောင့် Manley VOXBOX ကို ကျွန်တော် သုံးရလဲ ကြိုက်ရလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း နဲံ့ လူတကာကို ဝယ်ဖို့ဆေးထိုး ရတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်လုံတဲံ့ အကြောင်းပြချက်ပါပဲ
ဒီမှာ UAD က Video
ဒီတစ်ခေါက် ပြောပြမှက အခုမှ လေ့လာ နေတဲ့ လူတွေအတွက် အရေးကြီသလို တစ်ချို့ သင်တန်းတွေမှာ ပြောရကောင်းမှန်း မသိလို့ မပြောလိုက်တဲ့ အရာ Frequency Masking ပါ
Frequency Masking ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Frequency Range တူညီတဲ့ Element တွေကို တပြိုင်နက်တည်း မှာ နှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုထက် ပိုပြီး
တစ်ချိန်ထဲ တီးလိုက်တဲ့အခါ Amplitude များတဲ့ ကောင်က နဲတဲ့ကောင်ကို Masking လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်် စေပါတယ် ။
လူအကြားအာရုံ ကိုက တူညီတဲ့ Frequency အသံတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ပဲ ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခု
ခြင်းစီ ကြားရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး ဒီဖြစ်စဥ်ကို Frequency Masking လို့ခေါ်ပါတယ်
( Band Masking , Auditory Masking လို့လဲခေါ်ပါသေးတယ် )
Piano နဲ့ H-H ဟာ Highမှာ Frequency Range တူတဲ့ Element ဖြစ်တာအညီ တစ်ကောင်က တစ်ကောင်ကို Mask အုပ်တော့မှာပါ အဲ့အခါ Mixing ရဲ့ ရလဒ် ကတော့ High မှာ Pinging Madness တွေ
နောက်တစ်ခု Kick နဲ့ Bass ဆိုပါစို့ သူတို့ က Frequency Range ခြင်းတူတဲ့အပြင် Location ကအစ တူနေပါတယ် နှစ်ကောင်စလူံး က Center မှာနေတဲ့ ကောင်တွေဆိုတော့ ဖြစ်လာနိုင်ခြေကတော့
Bass ရဲ့ Low end နဲ့ Kick ရဲ့ Low end တွေ Fight ကြပြီး Mixing ရဲ့ ရလဒ်ကတော့ Low မှာ Muddiness
အိုခေ သူ့ကို ရှင်းထုတ်မယ်ဆို နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်
အဲ့ထဲက လူတိုင်း အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့
Masking ဖြစ်စေမယ့် Element တွေကို မတူညီတဲ့ Location မတူညီတဲ့ Side မှာထားပြီး Masking ဖြစ်တာကို ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ် Piano နဲ့ H-H လိုကောင်မျိုးတွေမှာ ဒီနည်းလမ်းဟာ အသုံးဝင်ပေမယ့် Center မှာ ထားရတဲ့ ဟာမျိုးတွေ နောက် Mono Mix မှာ ဆို ဒီနည်းလမ်း က သုံးလို့မရတော့ပါဘူး
Eqing Principal အပိုင်းတွေကျွန်တော်ရေးပေးပြီးသားပါ ဖတ်ပြီးနားလည်သဘော ပေါက်တဲ့ သူတွေဆို
အိုခေ စမယ် ပထမဦးဆုံး စစဥ်းစားပါ ဘယ် Element ကို Front မှာထားမှာလဲ ဘယ် Element ကို Back မှာ ထားမှာလဲ
Front မှာထားမယ့် Element ကို သူ့ရဲ့ Important Frequencies တွေကို Boost လုပ်ပေးပြီး
Back မှာ ထားမယ့် Element ကိုကြတော့ Front က Element မှာ Boost ထားတဲ့ Range အတိုင်းကို
Cut လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Masking ကို ဖြေရှင်းလို့ရပါပြီး
တစ်ခုတော့ ရှိတာက အလွန်အကျူးကြီးတွေ Eqing လုပ်ရင်တော့ Mix ရဲ့ ရလဒ်ဟာ Lazy mix ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါပြီ ထက်စဥ်စားစရာရှိတာက Mastering မှာဆိုရင်ရော
ဘယ်လိုရှငိးမလဲ Mastering မှာဆို ရင်တော့ Dynamic Equalizer
အဲ့ထဲကဆို ကျွန်တော့် Personal သဘောအရတော့
1 Soothe 2
3 TB Dseq
Audio Arr Luu
12 Channel Setup For Drum
သင်တန်းသားတစ်ယောက် လာမေးတာကို ဖြေထားပေးရင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Drum အတွက် လာတဲ့ Mic- set တွေ ကိုမသုံးချင်ဘူး တက်နိုင်လို့ တစ်ခုခြင်း selection သုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့
လူတွေအတွက် Guide ပါ
1. kick in - Large Diaphragm Dynamic
2. kick out - Large Diaphragm Condenser
3. Snare top - Cardioid Dynamic
4. Snare side - Large Diaphragm Condenser
(or) bottom - Dynamic
5 to 7. Tom - Dynamic
8. Hi-Hat - Condenser or Dynamic
9 to 10. OH - Cardioid or Omni Condenser
11 to 12 Room - Condenser or Ribbons
Mic Brand ( From Internet Source )
Audix D6 Dynamic.
Neumann KM184 MT Cardioid Studio Condenser.
Shure SM57-LC Cardioid Dynamic.
Sennheiser E604 Dynamic.
Shure BETA 52A Dynamic.
Multi mic techတွေ သုံးလာ ပြီဆို သတိကြီးကြီးထားရမှာက Phase Problem ပါပဲ အရေးကြီးလို့လား ဆိုတော့အရေးကြီးတာပေါ့ ဘယ်လောက်ထိအောင် အရေးကြီးလို့မေးရင် Mixing မှာ ခင်ဗျားသီချင်းရဲ့ Low end ကို ဖျက်စီးလိုက်နိုင်တယ် ဒါလောက်ဆိုသဘောပေါက် အဲ့တော့ acoustic guitar ကို Multi Mic ဖမ်းမယ်ဆိုကြပါဆို့ Mic A ဟာ guitar နဲ့ 8 လက်မ အကွာမှာ Sweet point တွေလို့ ထောက်တယ်ဆိုရင် Mic B ကို 3:1 Rule အရ A ရဲ့2ပေ အကွာ မှာ ပြန်ထောက်သင်တယ် 10db ဟပြီး ဖမ်းပေးရမယ် 4:1 rule လဲအဆင်ပြေတာပဲ Mic B ကို Room Mic ဆိုပြီး ထားခြင်ရာထားလို့မရဘူး အခုဒီစာရေးတဲ့အချိန် သီချင်းတစ်ပုဒ် Mixing ဆွဲနေရင်း Acoustic guitar လိုင်းမှာ Phase တွေ ကြားနေရလို့ ရှာကြည့်ရင်း ခေါင်းထဲရောက်လာလို့ရေးပေးလိုက်တာပါ
𝓔𝓺𝓲𝓷𝓰 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓲𝓹𝓵𝓮𝓼 ( 𝓣𝓱𝓮 𝓔𝓷𝓭 )
Rule of Hpf
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mixing မှာ Instrument တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု conflicting ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Mixing မှာ Muddy ဖြစ်နေတာကို Mixing လုပ်တဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ကြုံဖူးမှာပါ ၊ ဒီ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပြသနာရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကို ပြောပါဆို အဖြေကတော့ 20Hz to 400 Hz အတွင်းလို့ပဲဖြေပါရစေ ဘာကြောင့်လဲ ? ရှင်းပါတယ် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နားတွေဟာ 20 Hz to 400 Hz ကို details ကြားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့်မို့လဲ တချို့သော Engineer တွေက Woofer တွေခံထားကြတာပါ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့ Fabfiler Q3 လိုကောင်မျိူးဆိုမှာ Solo ပေးပြီး နားထောင်လို့ရပါသေးတယ် ဒါက Eqing အခြေနေမှာပါ Overall တစ်ပုဒ်လုံးကို ချုံငုံပြီး နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ woofer လိုလာပါလိမ့်မယ် ထားပါတော့ ​စကားပြန်ကောက်ရရင် လက်ရှိ ကိုယ်Eqing လုပ်နေတဲ့ Instruments ( or ) Sound မှာ 20Hz to 400 Hz အတွင်း အလုပ်လုပ်သလား အသံပါလားပေါ့ဗျာ ပါမပါစစ် မပါဘူးဆို Hpf သုံးသွားဖို့ အကြံပေးပါရစေ ဟိုတလောက SSL Plug-ins Only နဲ့ Green Day တို့သီချင်း ကို Live Mixing လုပ်တုန်းက ကျွန်တော် Low End တွေဘယ်လို ကိုင်တွယ်လဲဆိုတာ ပြောပြတုန်းက ကြည့်ရတဲ့ညီကိုတွေဆို သိမှာပါ မကြည့်ရသေးရင် Others ခေါင်းစဥ်အောက်ထဲမှာ Free Tutorial ဆိုတာရှိပါတယ် ဝင်ကြည့်ပါ..... Rule of Hpf ရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ Kick,Snare,Bass မဟုတ်ခဲ့ရင် 300hz around ထိ ကို Hpf သုံးကြည့်ပါ အဲ့လို သုံးချင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Mixing Balacing % ဟာ အနဲနဲ့အများ balance မျှလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် အကယ်၍ ဒီ Rang ကို Cut မလုပ်ချင်ရင်တောင် Dyn-Eq တစ်ခုခုနဲ့ Side-Chain သုံးဖို့အတွက် အကြံပေးပါရစေ။
Cut with Narrow Q
အရင် Part3 မှာ Wide Q 1st ဆိုတာလေး မှတ်မိဦးမှာပါ အခုတစ်ခါတော့ Narrow Q ပေါ့ Wide Q 1st တုန်းက bandwidth ကျယ်တဲ့အတွက် ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ Hz ကိုရှင်းထုတ်ဖို့ အတွက် တနည်းအားဖြင့် subtractive ထက် additive မှာ ပိုအသုံးဝင်တယ် ၊ တကယ်တမ်း subtractive eqing မှာ narrow q က အကောင်းဆုံးပါပဲ ဘာလို့ narrow q လဲ ? ဒီလိုဗျာ ကျွန်တော်တို့ စားမယ့် အသီး ဥပမာ သရက်သီးပေါ့ဗျာ အဲ့အသီးပေါ်မှာ အနာပါနေတယ် ဆိုပါစို့ ပါတဲ့နေရာကိုပဲ လှီးထုတ်မှာလား တစ်ခြမ်းလုံးလှီးထုတ်မှာလား ပါတဲ့နေရာပဲလှီးထုတ်မှာပေါ့ အရသာရှိတဲ့အပိုင်းတွေ ဘယ်လွှင့်ပစ်ချင်ပါ့မလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ Wide qနဲ့ subtractive သွားလုပ်မယ်ဆို conflicting frequency တွေအပြင် လိုအပ်တာတွေပါပါသွားနိုင်ပါတယ် အဲ့အခါကြရင် ကိုယ့်ရဲ့ element ဟာ thin ဖြစ်သွားပြီး Balacing မမျှတာတွေ focal points မရှိတာတွေ အဲ့ဘက်တွေကို ဦးတည်သွားနိုင်ပါတယ် အဲ့အတွက် Q ကို အကျဥ်းဆုံး ထားပြီး +10db လောက်ထိ Boost လုပ်ကြည့်ပါ ပြီးရင် ဘယ် frequency hz ကိုမလိုချင်တာလဲ ဆိုတာ knob ကိုလှည့်ရှာပေါ့ အဲ့အချိန် ringing sound တွေ ကြားရမယ် အဲ့ထဲကမှ ကိုယ့်ကို annoys ဖြစ်စေတဲ့ hz ဒါမှမဟုတ် conflict ဖြစ်နေတဲ့ hz ကို -6db လောက်ထိ cut လုပ်ကြည့်ပါ
ဘာကြောင့် -6db လဲ ?
ကျွန်တော် 6db rule ဆိုတာကို စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ အတိုချုံးပြောပြရရင် လူတွေရဲ့နားဟာ 6db Increase ဒါမှမဟုတ် Decrease ဖြစ်သွားတဲ့ အသံကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးဏှောက်က ချက်ခြင်း respond လုပ်ပါတယ် အဲ့အတွက် ဒီ -6db Cut လုပ်တဲ့ range ဟာ လေ့ကျင့်တဲ့အချိန် မှာလုံးဝ မများတဲ့ range တစ်ခု ပါပဲဗျ။
လာပါပြီး ရေးနေတဲ့ အကြောင်းရင်း အဓိက ပေါ့
Instrument တစ်ခုကို Front မှာထားမလား Back မှာ ထားမလား ဆိုတာဟာ အရင်ရှေ့မှာ ရေးပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်ရပါမယ်
Volume အနဲများ Rev အနဲများ High Frequency Contant အနဲများ နောက်ပြီး
4 Zone Mix Theory ကို ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အပြင် အခုဖေါ်ပြမယ့် နည်းနဲ့ထက်ပေါင်းလုပ်ဆောင်ရပါမယ်
အဲ့တော့ ကျွန်တော် အရှေ့က ရေးထားတာ တာတွေဟာ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ ရော ဖတ်ထားတဲ့ စာတွေ အရရော သင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတွေရဲ့ အတွေ့ကြံုတွေ စတာတွေကို အတိုချံုးပြီးရေးပေးထားလို့
ပြောရမယ်ဆို အနှစ်လေးတွေပါ ကျော်ပြီး မဖတ်စေချင်ဘူး
အခူပြောမယ့်နည်းကတော့4zone Mix ကို သိမှပဲ အဆင်ပြေမှာပါ
Instrument တစ်ခူ ဒါမှမဟုတ် Vocal ကို
Q သည် 1 မှာပဲရှိရမယ်
+4db Boost လုပ်ရမယ်
Q သည် 1 မှာ ပဲရှိရမယ်
-6db Cut လုပ်ရမယ်
ဒါလေးပါပဲ ကြိုးစားပြီး လုပ်ကြည့်ကြပါ
အဲ့တော့ ကျွန်တော်က Mixing ဆွဲတဲ့ အခါ
Eq တွေကို အဆင့်ဆင့်သုံးတဲ့ အခါ အခါတွေလဲ ရှိတယ် မလိုတဲ့အသံတွေဖြတ်ဖို့
နောက်တစ်ခါ လိုချင်တဲ့ အသံ Colour တွေ ရအောင်လုပ်ဖို့
နောကိဆုံးမှာတော့ အပေါ်ကသုံးထားသမျှ တွေထဲက
အသံတွေထဲ Honky တွေ Muddy တွေရှာဖျက်တယ် များသောအားဖြင့် Honky ကို ရှာပြီး ဖျက်လေ့ရှိတယ် သူ့အသံဟာ အရမ်း ဆူးဆူးဝါးဝါးဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့လိုင်းပေါင်းများစွာ Honky တွေများလာမယ်ဆို Master ရောက်ရင်
ကွီးနေထူးနိုင် ဘာသာ၁၇ မျိုးနဲ့ လေချွန်သလို အသံတွေပါလာနိုင်ပါတယ် ။
ကဲ Eqing Principles ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါကတော့ ဒီတင်ပဲပြီးဆုံးပါပြီ အပတ်စဥ်စောင့်ပြီးဖတ်ပေးကြတဲ့ ညီကိုတွေ ကိုအများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ
Online Store မှာ Mixing လေ့ကျင့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သက်သက်သာသာနဲ့ Multitrack တွေ Tutorial ရောင်းပေးနေပါပြီ အားပေးကြပါဦး Web ထက် Run ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာ